Boorsooyinka Shiinaha Dhexda - Kuwa Jumlada ah & Iibso Qiimaha Dhimista Dheer - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Bacda dhexda
Bacda dhexda oo ordaya
(1) Qeybta iibka: midkiiba (2) Cabirka hal xirmo ee caadiga ah: dherer 46cm X ballac ah 11cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka xirmada iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka (3) Qeexitaanka xirmooyinka: 28cm X 39cm X 40cm 60PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh (4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 7.5Kg
Bacda suunka ragga
(1) Boorsadan suunku waa khasnad dhab ah oo loogu tala galay dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Waxay leedahay naqshad gebi ahaanba u gaar ah waxaana loo isticmaali karaa bacda dhambaalka ama kiishka dhexda. Bacda suunku waxay leedahay qori jeexan iyo jeebka hore si dhakhso loogu helo iyo jeeb gudaha ah. Dhererka suunka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahidaada (waa la habeyn karaa). Waxaa laga sameeyaa maqaar gurguur ah oo matte ah waxaana lagu heli karaa midabbo kala duwan. Naqshadeynta fudud iyo waxyaabaha ugu tayada sareeya ayaa ka dhigaya kiishkan suunka mid gaar ah. (2) Boorsadan suunka ragga ahi waa mid aad u qurux badan oo qaabaysan. (3) Tayo fiican oo layaableh, runtii ma jiraan ereyo lagu tilmaamo sida ay u cajiibka yihiin.
Bacda suunka haweenka
(1) Boorsadan suunku waa khasnad dhab ah oo loogu tala galay dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Waxay leedahay naqshad gebi ahaanba u gaar ah waxaana loo isticmaali karaa bacda dhambaalka ama kiishka dhexda. Bacda suunku waxay leedahay qori jeexan iyo jeebka hore si dhakhso loogu helo iyo jeeb gudaha ah. Dhererka suunka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahidaada (waa la habeyn karaa). Waxaa laga sameeyaa maqaar gurguur ah oo matte ah waxaana lagu heli karaa midabbo kala duwan. Naqshadeynta fudud iyo waxyaabaha ugu tayada sarreeya ayaa bacda suunka ka dhigaya mid gaar ah.
) Hadda waxay noqotay xulasho wax ku ool ah, sida caadiga ah sida boorsooyinka dhabarka ama boorsooyinka loo yaqaan 'status tote bag'. Waxaa jira sabab wanaagsan oo tan: bacda dhexda ayaa gebi ahaanba nasin karta gacmahaaga, laakiin wali si fudud ayey u xiran tahay. Dabcan, waxay umuuqataa qabow, laakiin sidoo kale waa wax badan oo wax ku ool ah.
Bacda dhexda ragga
(1) Cabirkiisu wuxuu si sahal ah ula jaanqaadi karaa waxyaabo badan, sida muraayadaha qorraxda, muraayadaha, dalladda, taleefanka gacanta, muraayadaha indhaha, jeebka, iwm (oo ku habboon ciidaha)! Jeebka ragga sifiican looga sameeyay ayaa u adkeysan kara khilaaf iyo xiisad badan. (2) Boorsooyinka suumanka ayaa aad ugu badan, qaarkood xitaa way yar yihiin. In kasta oo ay noqon karaan kuwo wax ku ool ah, waxaan u maleyneynaa inay kuwani u eg yihiin bayaannada moodada. Waxaan ogaanay inaan xirno dharkaas gaaban markaan xirano gaagaaban, maxaa yeelay goomayaasha qaar waxay leeyihiin jeebado yar yar mana heysan karaan wax walba. Laakiin markaad rabto inaad xirato dharka waddooyinka casriga ah, boorsada suunka moodada ugu fiican ayaa ah xulasho wanaagsan.
baakad fanani ah
baakad fannaaniin hawo ah waa bac aad u fiican